South Africa Wine Adventures
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » South Africa Wine Adventures
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Narị afọ nke 17 akara mmalite nke ụlọ ọrụ mmanya in South Africa. Afọ ahụ bụ 1655 mgbe ndị Dutch bi na ya kụrụ mkpụrụ vaịn mbụ ya. E mepụtara karama mbụ ahụ na Cape Town site n'aka Jan van Riebeeck, onye njikwa ọdụ Dutch maka ụlọ ọrụ Dutch East India bụ onye rutere na 1652 iji guzobe ọdụ izu ike - na-eweta mkpụrụ ọhụrụ maka ndị ahịa ya na Cape of Good Hope. Gịnị mere ị ga-eji mepụta mmanya? Ọ dị ka ebumnuche nke ihe ọ na-achụ bụ ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ghara ịgbara ọsọ n'oge njem ha n'okporo ụzọ na-esi ísì ụtọ na-aga India na East. Owuwe ihe ubi mbụ ya bụ February 2, 1659, 7 afọ mgbe ọ rutere (1652).
Simon van de Stel soro Riebeeck, wee nwee ike melite ogo nke viticulture ma mụbaa ọnụ ọgụgụ nke acres, guzobe ala Constantia. Mgbe ọ nwụrụ, ebe a na-a winụcha mkpụrụ vaịn ya gbawara ruo 1778, mgbe Hendrik Cloete zụrụ ya.
Ọbụna na narị afọ nke 18, mmanya ndị South Africa na-ewu ewu na ndị okenye Europe na-ahọrọ mmanya ndị a ma bụrụ ọkacha mmasị nke Napoleon Bonaparte. A na-ahụta mmanya ndị na-atọ ụtọ sitere na Constantia dị ka ndị kachasị mma n'ụwa na narị afọ 18 na nke 19.
N'ihi anya, okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze, ndị na-akọ nri kwụsịrị ịme mmanya, na-atụgharị ala ka ọ bụrụ ubi mkpụrụ osisi na ubi alfalfa iji zụọ ụlọ ọrụ enyí nnụnụ na-eto eto. Ka oge na akụnụba gbanwere, ndị na-eto eto malitere ịgha mkpụrụ vaịn, na-ahọpụta mkpụrụ vaịn dị elu (yabụ, Consault) yana ka ọ na-erule mmalite afọ 1900 ihe karịrị mkpụrụ osisi vaịn 80, nke dị mwute, mepụtara "ọdọ mmiri" ndị na-emepụta, na-elekwasị anya Ihe dị ukwuu karịa ịdị mma, na-eme mmanya a na-apụghị ire ere ma wụsara ya n'ime osimiri na iyi.
O doro anya na ahaghị nhata n'etiti ọkọnọ na ọchịchọ, na -emepụta ọnụ ahịa ndị dara mbà n'obi. Ọnọdụ a dị oke egwu mere ka gọọmentị guzobe Kooperatieve Wiibouwers Vereiging Van Zuid-Afrika Bpkt (KWV) na 1918. E nyere nzukọ ahụ iwu ịtọ ntọala na ọnụahịa maka ụlọ ọrụ mmanya South Africa niile. Iji mee ka mmanya na-egbu mmanya, KWV gbochiri mkpụrụ na ịtọ ọnụahịa kacha nta, na-agba ume ịmepụta ụdị na mmanya siri ike.
Narị Afọ nke 20 Nke nwere uche
Na 1990s, apartheid kwụsịrị na ahịa mbupụ ụwa mepere maka mmanya si South Africa. Ndị na-emepụta ihe nakweere viticulture ọhụrụ, usoro imepụta mmanya na teknụzụ, na-elekwasị anya na Shiraz, Cabernet Sauvignon na Chardonnay. Thehazigharị nke KWV n'ime ụlọ ọrụ nkeonwe mere ka ihe ọhụrụ na mmelite dị mma, na-amanye ndị nwe ubi vaịn na ebe a na-a winụ mmanya ka ha wee nwee asọmpi ma lekwasị anya na ịme mmanya na-agbanwe site n'ọtụtụ na mma. Ka ọ na-erule 2003, pasent 70 nke mkpụrụ vaịn a gbutere ruru n'ahịa ndị ahịa dị ka mmanya.
Ka ọ dị ugbu a, mmanya vine dị 93,021 ha na-amị mkpụrụ vaịn ma na-akọ ugbo na South Africa na mpaghara dị ihe dị ka 498 n'ogologo. Isi ubi vaịn dị n'etiti Constantia, Paarl, Stellenbosch na Worcester. E nwere ihe ruru 60 appellations na Wine of Origin (WO) sistemụ nke amalitere na 1973 site na ndị isi nke mpaghara emepụtara aha, mpaghara na ngalaba.
WO mmanya ga-enwerịrị: Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.
Lelee nlegharị anya ụwa maka njem nlegharị anya na iyi ọha egwu